Nhau - Indoor kugwinya-kunzwisisika mune zvemitambo indasitiri maitiro
Lululemon anowana imba yekusimbisa kambani Mirror
Lululemon akaita yayo yekutanga yakakura-chiyero kutenga kubva pakavambwa, uye akashandisa madhora mazana mashanu emamiriyoni kutenga imba yekusimba kambani Mirror. Calvin McDonald anofanotaura kuti Mirror ichave inobatsira muna 2021. Chinhu chakakosha chigadzirwa cheMirror i "yakazara-girazi refu". Kana yakavharwa, inguva yakazara yakazara-girazi. Kana ichivhurwa, girazi rinoratidzira girazi rinoratidzirwa rine kamera yakadzamirwa uye mutauri, iyo inoratidza chimiro chemushandisi uye data rehutano munguva chaiyo, uye inogona zvakare kupedzisa makosi ehupenyu nevarairidzi vekusimba online.
Musi waZvita 10, Lululemon akaburitsa yake yechitatu-kota yekuita mushumo. Kutengesa kwekota kwakakwira 22% pagore-ne-gore kusvika US $ 1.117 bhiriyoni, mubairo wakakura wemari wakawedzera kusvika pa56%, mhindu yakakwira yakakwira 12.3% kusvika US $ 143 mamirioni, uye mutengo wayo wemusika wakapetwa zvakapetwa kaviri. Adidas. Kubudirira kwaLululemon hakupatsanurike kubva kune ruzivo rwevatengi uye kugona kusarudza pfungwa yekutengesa pamwe nekubatana nevamwe vadzidzisi veyoga uye masangano ekudzidzisa. Kutanga, vadzidzisi vanopihwa yemahara yoga mbatya, kuitira kuti vadzidzisi vapfeke Lululemon yoga mbatya kudzidzisa. Vadzidzisi ava vakavewo “mamishinari echiratidzo” aLululemon kusimudzira ruzivo rwechiratidzo. Panguva imwecheteyo, yakavhura nhevedzano yezvipfeko zvevarume uye zvimwe zvigadzirwa zveparutivi uye zviitiko zvepamhepo zvekuwedzera vateereri vemuchina uye kutenga chishuwo.
Inotungamirwa nekukwira kwemukati mekugwinya, kuvandudzwa kwemukati indasitiri yemitambo mbichana yakavandudza zvishoma nezvishoma. Particle Mania chiratidzo chezvemitambo. Zvigadzirwa zvaro zvinosimbisa zvakapundika zvakapetwa mune aesthetics uye hunyanzvi. Inotsiva pfungwa yemafashoni epamusoro mukugadzirwa kwemitambo, uye inoedza kuongorora mukana wekuti mbatya dzemitambo dzitarisike kubva munzira dzakasiyana dzeetekinoroji, tsika nemagariro. Carver mugadziri wepamusoro-magumo emitambo brand. Musi waNovember 13, 2020, chipfeko chemitambo cheParticle Fanatic chakapedza mamirioni zana yuan C kutenderera kwemari.
Pasi pesimba redenda iri, indasitiri yemitambo iri kusimukira nekukurumidza, uye kukwira kwemukati memukati mevakadzi musika haigone kufuratirwa. Iyo inogona kuoneka kubva mukuteedzana kuvhurwa kweyoga mitsara nefashoni uye yekuvaraidza emitambo mhando senge NIKE uye PUMA. Ino nguva, kutanga kwaKurume wegore rino, Adidas neNini Sum vakabatana kuti vatange mwaka mutsva wemamodeli ekubatana chete evakadzi; rakafemerwa nehunyanzvi hwakasiyana senge kudhinda kwechidzitiro nemumadziro, zvakasanganiswa nemaoko-akapendwa echisikirwo maitiro, zvakamutsa chizvarwa chitsva chevakadzi. Gadzira akawanda mapoka, akakodzera iyo yoga kufungisisa, kumhanya maekisesaizi uye mimwe mitambo.
Achinetsekana nemitambo yevakadzi uye hutano, NIKE yakavhura zviri pamutemo VIP vakadzi yevatengi iyo yoga chiitiko zviitiko, izvo zvaisanganisira NIKE vakadzi vamiriri 'ruzivo rwehutano kugovana uye zvichingodaro. Chechipiri, NIKE yakatanga zvakare mutsva weyoga, kuunza chiitiko chiri nani chevanhu vanoita yoga, uye kukurudzira kugona nesimba ravasina kumbobvira vabata; pamusoro pefashoni masitayera, ivo vanoteerera zvakanyanya kumachira anoshanda uye vanotora yakasarudzika DRI-FIT yekukurumidza-kuomesa kumusoro Iyo jira rakasununguka rinosimudzira kuora kweiyo lactic acid mumuviri wemunhu, zvinobudirira kunoderedza kusuwa uye kupfava mushure mekurovedza muviri, uye kunoderedza kunzwa kwekuneta.
Akatungamirwa muMunich, Veloine ndiye anokunda iyo ISPO2021 Kuwa Nguva Yemuchando Mubairo. Veloine ndeye premium bhasikoro bhasikoro rakagadzirirwa vakadzi. Mucherechedzo unosimbisa kuti vakadzi vazhinji vachiri kuda kurovedza muviri panguva yekuzvitakura. Nekuda kwemitezo mikuru yekuzvitakura, vanowanzo fanirwa kupfeka mbatya dzevarume dzemabhasikoro, izvo zvisingaenderane zvakanyanya nemamiriro emuviri evakadzi vane nhumbu. Veloine akagadzira zvakanyanya vakadzi vane nhumbu mabhasikoro evakadzi vane nhumbu. Series, yakasanganiswa muhunyanzvi dhizaini, inounza kudzivirirwa kune vakadzi vane nhumbu.